रेखासँग एक रातको 'डिनर डेट'ले... :: विद्या राजपुत :: Setopati
रेखासँग एक रातको 'डिनर डेट'ले जयाले बचाएकी थिइन् आफ्नो विवाह!
बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनको विहे भएको आज ४४ वर्ष पुगेको छ। अमिताभको प्रेम सम्बन्धको चर्चामा अभिनेत्री रेखाको नाम सबैले लिने गरेका छन्। जया बच्चनसँग विवाह भइसेकपछि पनि अमिताभले रेखासँग प्रेम सम्बन्ध बनाइ राख्न चाहन्थे।
तर जयाले शान्त रुपमा आफ्नो विवाह र परिवारलाई बचाउन चाहन्थिन्। यसबीचमा जयाले आफ्नो विवाह बचाउन निकै मिहेनत गर्नुपरेको थियो। जयाको एक प्रयासले रेखा र अमिताभको दुरी बढेको थियो।
सन् १९७७ जब रेखाले सिउँदोमा सिन्दुर लगाएको, आमा बन्न लागेको र अमिताभ बच्चनसँको सम्बन्धको खबर आगो जस्तै शहरमा फैलिएको थियो।
अमिताभ शुटिङको समय शहरबाट बाहिर थिए। त्यही बेलाको एक दिन जयाले रेखालाई फोन गरिन्। फोनमा जयाको आवाज सुन्ने वित्तिकै जयाले जथाभावी बोल्छिन् भन्ने अनुमान रेखाले लगाएकी थिइन्। तर यस्तो भएन्। जयाले रेखालाई फोन गरेर घरमा खाना खान बोलाइन्।
जयाले घर बोलाएर आफुलाई गाली गरेर बेइजत गर्छिन् भन्ने कुरा रेखाले मनमा पालेकी थिइन्।
रातिको समय रेखा सजिएर जयाको घर पुगिन्। रेखाको भन्दा निकै फरक पहिरनमा जया सजिएकी थिइन्। निकै सादा पहिरनमा उनले रेखाको स्वागत गरिन्।
उनले रेखासँग धेरे कुरा गरिन् तर यस गफमा उनले अमिताभको बारेमा एक शब्द पनि केही कुरा निकालिनन्। जयाले आफ्नो घर र बगैँचा रेखालाई देखाइन्।
जब खाना खाएर रेखा आफ्नो घर जाने तर्खरमा थिइन् तब जयाले रेखालाई एउटा कुरा सुनाइन् तब रेखा निशव्द भइन्।
जयाले रेखाको कानमा भनेकी थिइन्,‘चाहे जे होस् तर म अमितलाई छोड्दिन।’
भोलिपल्ट यस विषयमा मिडियामा निकै कुरा भयो तर ती दुवै अभिनेत्रीले मुख खोलेनन्।
यस डिनरपछि अमिताभको जीवन एकाएक परिवर्तन हुन थाल्यो। उनले रेखासँग दूरी बढाउन थाले। अमिताभले रेखा र आफ्नो सम्बन्धबारे जयाले थाहा पाएको तर परिवारको लागि उनले कसैलाई केही नभन्ने थाहा पाएपछि रेखासँग दूरी बढाएका थिए।
जानकारका अनुसार यदी जयाले रेखासँग त्यो दिनको डिनर नगरेको भए आज रेखा जयाको जीवनमा दोस्रो महिला बनेर आउने सफल हुनेथिइन्।
सैफ र करीनाबाट टाढा जानेछन् तैमुर!
विराटलाई मन पर्दैन अनुष्काको यस्तो बानी!
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज २३, २०७४, ०७:१२:४२